We She Me: အီတာလျံရွာသို့ တစ်ခေါက်
ကမ္ဘာပေါ်က အထင်ကရ မြို့ကြီးတွေ တော်တော်များများမှာ ဌာနေတွေ (Native) တွေ နေတာက တ၀က်လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ကျန်တာတွေက ပြည်ပကသူတွေ (Foreign Born) တွေ နေကြတယ်။ အဲဒီလို မြို့ကြီးတွေထဲမှ (၂၀၀၅ စစ်တမ်းအရဆိုရင်) အမေရိကားက မိုင်ယာမီက အဆိုးဆုံး။ တ၀က်ကျော်က ကျူးဘားတွေ။ ခိုးဝင်လာတာရော ဗြောင်ဝင်လာတာရော။ အိန္ဒိယက ကုလားတွေကတော့ ပြောမနေနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့က မြို့ကြီးတွေမှာ သူတို့ပဲ။ ကနေဒါက တိုရန်တို၊ ဆွစ်စလန်က ဂျီနီဗာ လိုမြို့မျိုးတွေကနေ UAE က ဒူဘိုင်းလိုမှာထိ သူတို့တွေက ရာခိုင်နှုန်း အတော်များများ ယူထားကြတယ်။ ကနေဒါက ဗန်ကူးဗားကတော့ တရုတ်တွေ အကြိုက်။ ဆစ်ဒနီမှာလည်း ဗြိတိန်ဖွား ၂ သိန်းနီးပါးပြီးရင် တရုတ်တွေက တစ်သိန်းကျော်နဲ့ ဒုတိယ လိုက်တယ်။
စင်္ကာပူနဲ့ ဆစ်ဒနီကတော့ လူဦးရေ စုစုပေါင်းကလည်း ၄သန်းခွဲ ကျော်ကျော်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်း။ Foreign Born တွေကလည်း ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းလောက်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါဟာ လန်ဒန်နဲ့ ပါရီထက် Foreign Born ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းပိုများပါသေးတယ်။ စင်္ကာပူက လူတွေ (သူ့နိုင်ငံသားတွေ)က စင်္ကာပူကို ဘာကြောင့် ကြိုက်သလဲလို့ မေးလို့ရှိရင် စည်းကမ်းရှိရှိ တိုးတက်တာ အပြင် ယဉ်ကျေးမှုစုံလို့ Multi-Culture မို့လို့ ကြိုက်တယ် ပြန်ဖြေရင် သိပ်ကြိုက်တာ။ စင်္ကာပူ အစိုးရကလည်း တရုတ်၊ မလေး၊ ကုလား သုံးမျိုး တည့်ပြီး နေနိုင်အောင် စင်္ကာပူကို Multi-Culture ဖြစ်တယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်ထားတာလေ။
တကယ်တမ်း တရုတ် ကုလား မရှိတဲ့ မြို့ကြီးဆိုတာလည်း ခပ်ရှားရှား။ တကယ်တမ်း စင်္ကာပူမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်တာ စိတ်ဝင်စားစေတာ မလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အစားအစာပါ။ Peranakan မလေး-တရုတ်တွေ၊ ပီနန်ဖက်က အစားအစာတွေတော့ ပိုကြိုက်တယ်။ စင်္ကာပူမှာ China Town အပြင် Little India ဆိုပြီး သူ့လူမျိုးနဲ့သူ ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ကုန်စုံဆိုင်တွေ ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာတော့ အားလုံး သိပြီးလောက်ပဲ။ NYC (New York City) မှာ လူဦးရေ ၈ သန်းကျော် ရှိရာမှာ ၈% ကျော်က အီတာလျံတွေ အီတာလျံ-အမေရိကန်တွေတဲ့။ နယူးရော့ခ်မှာလည်း Little Italy ဆိုပြီး ရှိတယ်။ အီတလီစာ ကောင်းကောင်း စားချင်ရင် အဲဒီဖက်ကို သွားစားကြတယ်။
ဆစ်ဒနီရောက်တော့ တရုတ်၊ ကုလား ယဉ်ကျေးမှု (အဓိကကတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ) အစားအစာ အပြင် ဗီယက်နမ်တွေ၊ ကိုရီးယားတွေ၊ လက်ဘနွန်တွေ၊ ပါရှန်းတွေ (အီရန်တွေ)၊ အီတာလျံတွေရဲ့ အစားအစာတွေကိုပါ လက်လှမ်းမီမီ မြည်းစမ်းခွင့် ရလာတယ်။ သူတို့တွေက တစ်မျိုးကို လူဦးရေ ၅သောင်းကျော် ရှိကြတာဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေများသလို သူတို့ အစားအစာတွေလည်း ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ပုံမှန်ကို ရောင်းချပေးနေတယ်။
ဗီယက်နမ် အမဲပြုတ် ဟင်းရည် (Pho) “ဖာ” ကောင်းကောင်း သောက်ချင်ရင် ဗီယက်နမ်ဆိုင်မှာ စားလို့ရတယ်။ ပိုကောင်းတာ သောက်ချင်ရင် သူတို့တွေ များများစားစား စုနေတဲ့ နေရာကို သွားစားလို့ရတယ်။ အဲဒီက ဟင်းရည်က ဆိုင်ဂုံ(ဟိုချီမင်း)မှာ တစ်ခါ သောက်ခဲ့ဖူးတာထက်တောင် ပိုကောင်းနေသေးတယ်။ ကိုရီးယားတွေလည်း များများစားစား နေတော့ ကိုရီးယား ဘာဘီကျူး၊ ဟော့ပေ့ါလည်း ကောင်းကောင်း စားချင်ရင် စားလို့ရတယ်။ ကျွန်တော် လက်ဘနီစ် နံပြားလို့ ခေါ်တဲ့ Lebanese Bread ကလည်း ဆိုင်တိုင်းမှာ ရောင်းတယ်။ အာရပ်စာ ခပတ်ဘ် (Kebab)ဆိုင်တွေလည်း အတော်များများရှိတယ်။ ပြောရမည်ဆို ဆစ်ဒနီက လူမျိုးအတော်စုံပြီး အစားအသောက်လည်း စုံတော့ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး မြည်းစမ်းလို့ မကုန်နိုင်သေးပါဘူး။
အဲဒီလိုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အီတာလျံစာ စားချင်တာရယ် ဆစ်ဒနီထဲက ဟိုနား ဒီနား မရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာ သွားချင်တာနဲ့ အီတာလီတွေ စုနေတဲ့ Leichardt လို့ခေါ်တဲ့ နေရာကို သွားကြတယ်။ အဲဒီမှာ အီတာလျံ စားသောက်ဆိုင်တွေအပြင် Italian Forum လို့ခေါ်တဲ့ အီတလီကမြို့တွေလို ရင်ပြင်နဲ့ အောက်ထပ်က စားသောက်ဆိုင်နဲ့ အိမ်တွေလိုမျိုး လုပ်ထားတဲ့ နေရာကို ကြည့်ချင်တာနဲ့ သွားကြတယ်။ စင်္ကာပူက Bugis Junction မှာ အခုနောက်ပိုင်း Renovate လုပ်ထားတဲ့ လမ်းကျဉ်ထဲမှာ အောက်က စားသောက်ဆိုင်တွေ အပေါ်က အထည်ဆိုင်တွေလိုမျိုးပါ။
Italian Forum သွားချင်ရင် သူနဲ့ ကပ်လျက်က Norton Plaza မှာ ကား ၂ နာရီ အခမဲ့ ရပ်လို့ရတယ်။ Italian Forum ရောက်တော့ အထဲမှာ အီတာလျံ စားသောက်ဆိုင်က များများ စားစား မရှိပါဘူး။ ၄-၅ ဆိုင်ထဲ ရှိရာမှာ ဘယ်ဆိုင် စားရမယ်မှန်း မသိဖြစ်နေရော။ တစ်ဆိုင်ကတော့ ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် ဈေးကြီးမည့် ပုံပေါက်နေတာနဲ့ မ၀င်လိုက်ဘူး။ အပြင်က မန်နူးကဒ်လေးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း ဟင်းတစ်မယ်ကို ၃၀-၄၀ အထက်မှာ။ အဲဒါနဲ့ လျှောက်ပတ်ကြည့်နေတုန်း တစ်ဆိုင်မှာတော့ ဧည့်ကြိုကလည်း အပြင်မှာ ပြုံးရွှင်ဖော်ရွေစွာ နှုတ်ဆက်ပြတယ်။ သူ့မန်နူးကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း တစ်ပွဲကို ၂၀ကျော်လောက်ပဲ။ ဧည့်ကြိုကောင်လေးရော စားပွဲထိုးကရော အီတာလျံရုပ်ပဲ။ ဆိုင်ထဲမှာလည်း သမီးကြိုက်တဲ့ အီတလီ ရေခဲမုန့် Gelato ကောင်တာလည်း ရှိတော့ အဲဒီဆိုင်ကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။
ဆိုင်ထဲရောက်တော့ ပီဇာရယ် အီတာလျံစာ တစ်ခုရယ် မှာပြီးတော့ သမီးအတွက် ရေခဲမုန့်သွားဝယ်ပေးတော့ ဆိုင်ထိုင်တာ တရုတ်ပါ။ ဟောင်ကောင် တရုတ်ရုပ်ပဲ။ ဆစ်ဒနီမှာ ဟောင်ကောင်က တရုတ်တွေလည်း အတော်ရှိတယ်။ သန့်သန့်ပြန့်ြ့ပန့်နဲ့။ ရေခဲမုန့် ၀ယ်ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ်လာထိုင်တော့ ကိုယ်ရွှေတရုတ်ကလည်း ထလာပြီး စားပွဲထိုးတွေကို ဟိုခိုင်း ဒီခိုင်း လုပ်တယ်။ သြော် သူက ဆိုင်ရှင်လား တွေးမိတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ မီးဖိုထဲက ထွက်လာတဲ့ တရုတ်မ စားပွဲထိုးလေး နောက်တစ်ယောက်ကလည်း တခြားဝိုင်းတွေမှာ ဟင်းတွေ ချပေးနေတာတွေ့လိုက်တယ်။ ဆိုင်ထဲမှာလည်း လူတစ်ရပ်လောက် ရှိတဲ့ ဂျူးလိယက်ဆီစာလိုလို ရိုမန် စစ်သားရုပ်အပြင် ကောင်တာပေါ်မှာ လာဘ်ခေါ် အန်းကုံးကြီး အရုပ်သေးသေးလေးပါ ထပ်တွေ့လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နတ်ကွန်းလိုလို အနီရောက် စင်လေးပါ တွေ့လိုက်တော့မှ ဒီဆိုင် တရုတ်ပိုင်တာ ပါလား သတိထားမိတယ်။
မီးဖိုထဲက ဟင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လို့ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး စားပွဲထိုးကို ခေါ်သံကြားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ စာဖိုးမှုးကလည်း လားလား တရုတ်ပါပဲလား။ အီတာလျံစာ စားချင်လို့ ဒီအထိ အိမ်ကနေဆိုရင် မိုင် ၂၀ကျော် ခရီးကို ချီတက်လာပြီးတော့မှ တရုတ်ပိုင်တဲ့ ဆိုင်မှာ တရုတ်စားဖိုမှုးရဲ့ အီတာလျံစာကို စားရပေဦးတော့မည်။ မျက်နှာဖုံးလှလို ၀ယ်လာပြီးမှ ဖတ်မကောင်းတဲ့ စာအုပ်လို ဧည့်ကြို အီတာလျံလေးရဲ့ အပြုံးကြောင့် ၀င်ထိုင်မိပြီးမှ တရုတ်စားဖိုမှုးရဲ့ လက်ရာကို မျိုချရတော့မည်။ ပြင်သစ်စာ အချက်ကောင်းတဲ့ ဂျပန်တွေလည်း ရှိသလို အီတာလျံစာ အချက်ကောင်းတဲ့ တရုတ်လည်း ရှိမှာပဲဆိုပြီး စားကြည့်လိုက်တော့ ပီဇာကလည်း ကိုယ့်အိမ်မှာ Pizza Base ၀ယ်ပြီး လုပ်စားတဲ့ ပီဇာကိုတောင် ခြေဖျားမမီပါလား။ နောက်တစ်မျိုးကတော့ သိပ်မဆိုးလှ။ Veal ကို ချက်ထားတာ ခရမ်းသီး ထည့်ထားတဲ့ နည်းလေးတော့ ရလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကုန်အောင် မစားနိုင်တဲ့ ပီဇာကို ထုပ်ခိုင်းပြီးတော့ ငွေရှင်းလိုက်ကာ အီတာလျံရွာလေးကနေ ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
| FLAGS: Australia , Travel , We
Moe Cho Thinn - 7/10/10, 4:10 AM
Melting Pot!! :))
kokomaung.uk - 7/10/10, 4:25 AM
အော်... နေရာတိုင်းမှာ အဲဒီလိုတွေ ရှိနေတာဘဲလား။ မန္တလေးက သီးသီးအသားကို ရှင်မတောင်သနပ်ခါးဆိုပြီး သနပ်ခါးခက်ကလေးတွေ ထိုးစိုက်ပြီးရောင်းသလိုနေမှာ။းဝ)
Anonymous - 7/10/10, 12:02 PM
Next time you can try Italian food in Burmese kitchen at broadway shopping centre. the plate is cheap and delicious. we give 20% off discount to everyone who are burmese.3 hours parking free too.
Phyo Evergreen - 7/10/10, 1:12 PM
ကိုအန်ဒီ Chef Ramsay လိုမျိုး ဆိုင်ရှင်ကိုအော်ခဲ့ပါလားဗျ..။ (;
T T Sweet - 7/10/10, 3:12 PM
ကိုအန်ဒီ ... ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေရှိသလား ... ဟားဟား
စလုံးမှာ အိမ်ငှါးနေတုံးက တစ်အိမ်မှာ အိမ်ရှင် တရုတ်မအပျိုကြီးက အီတာလျံစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာဗျ။ သူ့အိမ်ရောင်းမှာကြီးကို မရောင်းခင်လေး အချောင်ရအောင် ကိုယ်တွေကို ငှါးထားတာ။ အိမ်လာကြည့်သူတွေ ပွဲစားတွေ ခြေချင်းလိမ်နေမှ ခံလိုက်ရပြီဆိုတာသိရတာ။ နောက်တော့ အားနာလို့လားမသိ၊ သူ့ဆိုင်မှာ ကိုယ်တို့အိမ်ငှါးတွေကို တကူးတက ခေါ်ကျွေးပါရော ... အဲဒီတစ်ခါပဲ အီတာလျံစားသောက်ဆိုင်မှာ စားဘူးတာ။ ကိုအန်ဒီပြောတဲ့ တရုတ်တွေ ချက်တဲ့ အီတာလျံဆိုင်ပါပဲဗျား။
သူ့အိမ်မလဲ စမ်းချက်ထားတဲ့ ပစ္စည်းကရိယာတွေ။ အီတာလျံ ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်တွေပြည့်လို့။ အိမ်ငှါးတော့ ဒီတိုင်းထားခဲ့တာ။အဲဒီအကြောင်းတွေ ကြုံရင်ရေးချင်သေးတယ်။
Shinlay - 7/10/10, 5:00 PM
ဲပြုံးမိပါတယ်။ တရုတ်ကတော့နေရာတိုင်းပဲ။ မျက်နှာဖုံးလှအောင်တော့ လုပ်တတ်တယ်နော်။ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သက်ဝေ - 7/10/10, 5:27 PM
တရုတ်တွေကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာ ရောက်နေကြပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာ တော်တော်များများ နေရာယူ စိုးမိုးထားကြတယ်...။ အိမ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက အိန္ဒိယ မလေး အစားအစာ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ ကောင်တာထိုင်တဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်က တရုတ်၊ မီဂိုရင်းလို့ခေါ်တဲ့ မလေး ခေါက်ဆွဲကြော်တဲ့သူကလဲ တရုတ်၊ စားပွဲထိုးလေးတွေကလဲ အင်္ဂလိပ်စကား တလုံးမှ မတတ်တဲ့ ပြည်ကြီးတရုတ်လေးတွေ...း))
Kay - 7/10/10, 8:27 PM
၂၀ န့ ၄၀ ကွာသွားတယ် ထင်ပါ့..ကိုအန်ဒီရေ..
ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား.. လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ရင်လည်း..မိတ်အင် (---) အစစ် ရှာရ ခက်နေတဲ့..ခေတ်ကြီး ဆိုတော့..။
တောင်အာဖရိက..နှဲ တွေ တောင်... မိတ်အင် ဟ၀ှါ မဟုတ်လား။း)
Mon Petit Avatar - 7/11/10, 1:23 AM
Humm, they should change the name from Italian Forum to Chitalian Forum.
nu-san - 7/11/10, 1:29 AM
ဒီမှာလည်း တရုတ်မှ တရုတ်ချည်းပဲ.. ဂျပန်ကိုလာလည်တဲ့သူတွေထဲမှာ တရုတ် နဲ့ ကိုရီးယားက အများဆုံးပဲ.. အခုနောက်ပိုင်းဆို ဟိုတယ်တွေ super market တွေအစ Taxi သမားအဆုံး တရုတ်စကားပြောတတ်တဲ့သူတွေ အလုပ်ဖြစ်လာကြတယ်.. ဆစ်ဒနီက တရုတ်လုပ်တဲ့ အီတာလျံအစားအစာပေါ့.. :D
ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုတွေ လျှောက်သွားတာ ပျော်စရာကြီးနော်.. :))
nu-san - 7/11/10, 1:59 AM
visa သက်တမ်းတိုးဖို့ immigration office ကိုသွားရင် များသောအားဖြင့်တွေ့ရတာလည်း တရုတ်နဲ့ ကိုရီးယားပဲ.. တချို့တွေဆို မိသားစုလိုက် လာကြတာလေ.. စောစောက ရေးလက်စကို စာကျန်ခဲ့လို့ နောက်ထပ်ခေါက် ထပ်လာရေးတာ.. :D
ရွှေရတုမှတ်တမ်း - 7/11/10, 11:18 AM
အော် ....ပစ္စည်းမှန်သမျှ မိတ်အင်ချိုင်းနား မို့ စိတ်ပျက်ရတဲ့အထဲ..
အီတလီအစားအသောက် ဆိုင်ကလဲ ချိုင်းနား ဆိုပါလား..
ZT - 7/11/10, 3:16 PM
စလုံးမှာ Nonya အစားအစာ ကောင်းကောင်း Bugis Junction နားမှာ Buffet တစ်ခါ သွားစားဖူးတယ်။ မဆိုးဘူး။ ဒါနဲ့ အိမ်မှာ အတူနေဖူးတဲ့ မြန်မာ Chef လုပ်တဲ့ ပီဇာကကတော့ စားဖူးသမျှ ထဲမှာ အကောင်းဆုံးပဲ။ :) မြန်မာပါးစပ်တည့်လို့လားတော့ မသိဘူး။
khin oo may - 7/11/10, 6:23 PM
အာရပ်စထရိမှာ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ခဲ့တယ် အင်္ဂလိပ်လိုမေးပြီး. အာရပ်လိုအော်ြေ့ပာလိုက်တယ် အာရပ်ရုပ်ရည်မျိုးလဲတွေ့ခဲ့တယ်။ အာရပ်ကော်ဖီလဲမြင်ဘူးခဲ့တယ်။ ရှုတာလဲ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျေနပ်တယ်။
khin oo may - 7/11/10, 6:24 PM
khin oo may - 7/11/10, 6:26 PM
မောင်မောင် - 7/11/10, 7:09 PM
ဟောဗျာ ဟုတ်လဲ ဟုတ်ပါရဲ့ ။
အီတာလျံ စားသောက်ဆိုင်မှာ အီတလီလူမျိုးစားဖိုမှူး လက်ရာစားချင်တာပေါ့။
ကြည့်ရတာ အီတလီမှာမွေးတဲ့ တရုပ်လူမျိုး က ချက်ရောင်းတယ်လို့ မှတ်ယူလိုက်ယင် နဲနဲတော့ စိတ်ချမ်းသာရမယ်ထင်ပါတယ်။
Andy Myint - 7/12/10, 12:06 AM
"ရောကြော်"ပေါ့ မချိုသင်း.. အမေရိကားတို့ သြစတြေးလျတိုကတော့ မြို့ကြီးတွေဆို Asian တွေကအပိုင်စီးပြီး အဖြူတွေက တောမြို့တွေမှာ သွားနေရတော့မယ့် ပုံပဲ။
kokomaung.uk <<< ရောင်းတဲ့သူတွေကတော့ ဒီလိုပဲ မျိုးစုံ လုပ်ကြတာပဲ
Yeah? I will come over and try Burmese Italian food :P, Reader
အင်းဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ကပဲ လိုသလား အကျင့်ပါနေသလား မသိဘူး Phyo Evergreen။ မကောင်းရင်လည်း ဒီလိုပဲ ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ကြိတ်မှိတ်စားလိုက်တာ။
နောက်ဆို T T Sweet တို့ရဲ့ အီတလီ လက်ရာတွေ စားရမည့်ပုံပဲ။ သိုင်းကျမ်းတွေ အပြည့်လေ့လာထားတာ ဆိုတော့။
အီတာလျံ မျက်နှာဖုံးပေါ့ မShinlay... မဆိုးဘူး ဒီတရုတ် လုပ်တတ်တယ်။
ဟိုးတလောက Documentary တစ်ခုမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ရောက်နေတဲ့ တရုတ်တွေ အကြောင်းပြတော့ ကုလားပြည် ရောက်နေတာ ကြာတဲ့ တရုတ်တွေကလည်း ကုလားဆိုင်ဖွင်ထားတယ် မသက်ဝေ။ မီဂိုရင်းကို ၀က်ဆီနဲ့ ကြော်လို့ ကတော့ သေပြီဆရာပဲ။
အမှန်ပဲ မကေ။ ပိုက်ဆံ.. ပိုက်ဆံ။ တယ်လည်း စကားပြောတာပဲ။ China made souvenir ဆို သူ့ Icon နဲ့သူ ဥပမာ သြစတြေးလျဆို Sydney Harbour Bridge ပုံလေးဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ဖြစ်ပုံကတော့ ပြင်သစ်သွားပြီး လက်ဆောင်ပေးဖို့ စင်္ကာပူလေဆိပ်မှာ ပိုသက်သာတဲ့ ပြင်သစ်ရေမွှေး ၀ယ်ဖြစ်တာ။
Ha ha.. that'sagood name. I would sugest them. How about Sinolian Forum, Mon Petita Avatar...
အဲဒီမှာ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား ဘယ်လို ခွဲလဲ မနုစံ။ ကျွန်တော် မျက်လုံးထဲမှာတော့ အကုန်လုံး တူနေမှာပဲ။ :)
ချိုင်းနားဆိုလည်း ချိုင်းနားပေါ့ ဘကျောက်ရယ်။ အခုဟာက အီတာလျံ ဧည့်ကြိုနဲ့ လုပ်စားလို့ တင်းတာ ... ခွီး..
မြန်မာအရသာ ပီဇာဆိုတော့ ချဉ်ငံစပ်လား ZT
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါလောက်တော့ ရှုကြည့်ချင်သား မခင်ဦးမေ... ရေငွေ့နဲ့ ဆိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာထက် ပိုညင်သာမယ် ထင်တယ်နော့် ... ဇိမ်ပဲ
အရသာကောင်းရင်တော့ တရုတ်ချက်ချက် မြန်မာ ချက်ချက်ပါဗျာ။ အခုဟာက အရသာကလည်း မကောင်းလို့ ကိုမောင်မောင်။
nu-san - 7/12/10, 4:13 AM
အမြင်နဲ့တင်တော့ ခွဲမရပါဘူး အန်ဒီရယ်... တချို့ မြန်မာပြည်က လူတွေလည်း အသားနည်းနည်းဖြူလို့ကတော့ အ၀တ်အစား ဆံပင်အရောင်ပြောင်းပြီး ဂျပန်စတိုင် ထုတ်လိုက်ရင် မြင်တာနဲ့ ခွဲလို့မရတော့ဘူး.. တရုတ်တွေက ဘယ်သွားသွား ဆူညံဆူညံနဲ့ဆိုတော့ သူတို့တွေစကားပြောရင် ၂ ယောက်တည်းလောက်ပြောတာကို ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ကြားနေရတယ်လေ.. ကိုရီးယားကတော့ စကားပြောတာ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ.. immigration office ကျတော့ passport ကြည့်လို့ရတယ်.. တခြားနေရာမှာတော့ စကားပြောမှသာ သိတာ.. စကားသာ မပြောရင် တရုတ် ဂျပန် ကိုရီးယား ခွဲမရတာ အမှန်ပဲ.. :D
Anonymous - 7/15/10, 11:24 AM
တရုတ်ကတော့ ပစ္စည်း အတု လုပ်ပြီး စီးပွား ရှာဘို့ပဲ ချောင်းနေတာ။ စိတ် ကုန်စရာ ကောင်းပါတယ်။
Iron Cross - Sydney 2010